Hay’adda sirdoonka Mareykanka ee CIA oo soo bandhigtay xog cajiib ah - Muqdisho Online
Home News Hay’adda sirdoonka Mareykanka ee CIA oo soo bandhigtay xog cajiib ah
Hay’adda sirdoonka Mareykanka ee CIA oo soo bandhigtay xog cajiib ah
Hay’adda sirdoonka Mareykanka ee CIA ayaa lahayd xog-ogaal awood u leh inuu wax badan ka ogaado aqalka Kremlin-ka Ruushka, kaasi oo kaalin weyn ka cayaaray qiimeyntii lagu sameeyey in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu amray faro-gelinta doorashadii Mareykanka ee 2016, waxaa sidaas weriyey CNN iyo New York Times.
CNN iyo New York Times ayaa labaduba sheegay in xog-ogaalkaas laga soo saaray Ruushka sanadii 2017 kadib markii uu diiday yabooh hore oo ahaa inuu kasoo tago dalkaas.
CNN ayaa sheegtay in go’aanka lagu soo saaray shaqsi meel sidaas u muhiim ah joogay ay qeyb ka ahayd cabsi laga qabo in madaxweyne Trump iyo xubno sare oo ka mid ah maamulkiisa ay si qaldan gacmaha ula galaan akhbaar sir culus ah.
CIA-da ayaa diiday warbixinta CNN-ka, waxayna sheegtay in go’aanka ay uqaadatay uu ku salaysnaa “taxliil hadaf leh iyo xog uruurin cilmi ku dhisan.”
New York Times ayaa sheegtay in go’aanka jaajuuskaas lagu soo saaray ay sabab u ahayd sida warbaahinta ugu hadashay faro-gelintii Ruushka ay ku sameeyeen doorashada iyo warar ku saabsanaa xogo laga helay il-wareed ku dhex sugan Kremlin-ka.
Warbixinada ayaa sheegay in luminta xog-ogaal sidan u qiimaha badnaa oo ku dhex sugnaa Kremlin-ka ay sirdoonka Mareykanka ka dhigaty kuwa aan wax xog ah ka haysan ficillada Ruushka ee iminka iyo qorshahooda ay ku faro-gelinayaan doorashooyinka dambe ee Mareykanka.
Previous articlegudiga doorashooyinka Qaranka oo lakulmay xubano ka socaday beesha caalamka
Next articleRa’iisul Wasaare oo gaaray Degmada Xudur ee Gobalka Bakool
Qorshooyinka la Wareegidda Xukunka Dalka ee Ictisaam iyo Shirkooda Kismaayo
Axmed Geelle - January 16, 2018
Faysal Ali Axmed (Alteeso) - July 31, 2018